Gadzira yako wega Arcade muchina neRaspberry Pi | Mahara emahara
John Louis Groves | | Updated on 28/03/2019 10:50 | Raspberry Pi
Vazhinji vedu ndisu avo nekufamba kwenguva vanowedzera kupotsa kukwanisa kutamba mamwe mazita nemitambo yatakaita rombo rakanaka kurarama muhucheche hwedu. Pamwe uye nekuda kweizvi hazvishamise kuti isu tinotsvaga, sezvinobvira, kugadzira yedu yega arcade muchina nazvo zvekurarama, neimwe nzira, izvo zvakapfuura zviitiko.
Uine izvi mupfungwa uye kure nekugadzira muchina une hunyanzvi, chimwe chinhu chiri nyore kupfuura zvaungafungire sezvo nhasi mumusika mune makiti mazhinji ayo anokupa kare, kuidaidza neimwe nzira, iyo fanicha kutanga kubva, keypads uye kunyangwe kuisirwa kwakakwana kwechidzitiro uye Hardware Nhasi ini ndichatsanangura kwauri kuti isu tinongoda sei Raspberry Pi ine yakasarudzika dhizaini kuti tigone kuishandisa nechinangwa ichi.
1 Chii chatichada kuti tikwanise kutamba mitambo yedu yatinofarira?
2 Tinotora nekuisa RetroPie pane yedu Raspberry Pi
3 Kuisa RetroPie pane yako Raspberry Pi
4 Gadzira RetroPie paRaspberry Pi
Chii chatichada kuti tikwanise kutamba mitambo yedu yatinofarira?
Nenzira yakakosha uye kugona kutamba pane chero rudzi rwechidzitiro isu tinoda akasiyana zvinhu izvo, nhanho nhanho, isu ticharatidza maitiro ekuenderera mberi kwekumisikidza kwavo. Kana iwe uchida kushandura yako Rasbperry Pi kuita retro koni, izvi ndizvo zvaunoda:
Indaneti, inogona kuburikidza neLAN kana WiFi
Mutambo weconsole mutambo
Sekutaura pane ino poindi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti, kana rese software yaiswa uye tikwanisa kuita zvese nenzira kwayo, tinogona kutanga kufunga nezvekugadzira chigadzirwa chemberi uko kwatichazoda mamwe marudzi ezvinhu zvakaita seti kuvaka iyo fanicha.kupa yakanyanya hunyanzvi mufananidzo, mumusika pane zvakawanda zvingasarudzwa, uye kunyange kuzvishongedza nekiyi kiyi yayo, skrini ...
Gadzira Raspberry yako Pi sewebhu dura
Tinotora nekuisa RetroPie pane yedu Raspberry Pi
Kuzadzisa icho chinangwa chekupedzisira chekugona kunakidzwa nemitambo yedu pane chero skrini, uye kunyangwe tikapedzisira tashinga mune yedu yega arcade, pamwe kubheja kunonyanya kufadza gadza iyo RetroPie inoshanda sisitimu pane yedu Raspberry Pi. Chaizvoizvo isu tiri kutaura nezve vhezheni yeRaspbian uko, nekumisikidza, yakanyatsogadziriswa interface inosanganisirwa iyo inotibvumidza isu kuvhura iwo akasiyana emulators ayo ekurodha edu e retro mitambo.
RetroPie inosiyana nedzimwe dzese sarudzo pamusika nekuda kwenzira dzakasiyana dzekugadzirisa, kutonhora kwechimiro chayo uye kushandiswa kweakavhurika sosi emulators, chimwe chinhu chinoguma chagadzira Chero ani mugadziri anofarira anogona kubatana mukushanduka kwesoftware iyi zvese nekodhi nyowani uye nekumhan'ara nekugadzirisa zvikanganiso zvingaonekwa. izvo zvichagadziriswa munguva pfupi nenharaunda.
Panguva ino isu tinofanirwa kutora chimwe chinhu chakakosha kwazvo mukufunga uye izvo ndezvekuti, kunyangwe RetroPie ichikubvumidza kutevedzera zvinyaradzo zvakasiyana, chokwadi ndechekuti zvichienderana neRaspberry Pi yakashandiswa tinogona kutamba mimwe mitambo kana mimwe. Muenzaniso wakajeka ndewokuti kana tikatsaurira Raspberry Pi 1 kusvika kumagumo ino hatizokwanisi kutamba sarudzo senge Play Station 1 kana Nintendo 64, mbiri sarudzo dzayo zvirinani, tinoda sarudzo ine simba senge Raspberry Pi 2 kana 3. Urwu ndirwo runyorwa rwevanyaradzi iwe hwaunogona kutevedzera neiyi software:
Game mukomana Advance
Sega Mega Shira
Super Nintendo Varaidzo Sisitimu
Sega Mega Dhiraivha / Genesi
Chekupedzisira, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti RetroPie, nekutenda chaizvo kunharaunda hombe yevagadziri kuseri kweprojekti, nhasi inowirirana nenhamba huru yevatongi pasina chikonzero chekuisa chero software yekuwedzera. Tine muenzaniso wevatariri vanoenderana umo matinogona kushandisa chero kutonga kwePlay Station 3 kana Xbox 360.
Kuisa RetroPie pane yako Raspberry Pi
Kana tangove nezvose zvakagadzirirwa, inguva yekutanga kuisa RetroPie pane yako Raspberry Pi. Panguva ino pane nzira mbiri dzakasiyana dzakasiyana dzatinogona kusarudza uye dzinotipa mhedzisiro yakafanana.
Chekutanga pane zvese tinogona gadza emulator uchishandisa RetroPie chifananidzo neyakaisirwa Raspbian OS. Ini pachangu, ndinofunga iyi ndiyo nzira yakapusa sezvo isu tichizongoda kurodha pasi mufananidzo weRetroPie kubva kune iro webhusaiti repamutemo webhusaiti. Chinhu chakashata ndechekuti, nenzira iyi, iyo yekumisikidza ichabvisa zvese zvirimo mune microSD kadhi yatiri kushandisa.
Yechipiri sarudzo yaizopfuura tora mukana weakare Raspbian kuisirwa kuti iwe unogona kunge watove wakaisa pane yako Raspberry Pi. Pane uyu mufananidzo isu taizongofanira chete kuisa iyo RetroPie emulator. Nenzira iri nyore hatirasikirwe nefaira chero ratingave takazvigadzirira pane yedu diski kana microSD kadhi.
Kana iwe wakasarudza iyi yekutanga sarudzo, ingo zviudze iwe kuti utore mufananidzo weRetroPie unofanirwa kuwana iyo yekurodha menyu iripo pane webhusaiti yeprojekiti. Kana iyo hwindo yangotakurwa, isu tinongofanirwa kusarudza iyo vhezheni yedu Raspberry Pi uye tinya pane kurodha pasi. Iyo purojekiti inorema kwazvo saka kurodha pasi mufananidzo uyu kunogona kutora nguva yakareba, kune yepakati kumhanya kubatana kunogona kutora ingangoita maminetsi mashanu.
Panguva ino, tinofanirwa kuendesa zvemukati meiyo RetroPie mufananidzo kune yedu microSD kadhi. Kune izvi, ita ichi chiito Ini pachangu ndinoshandisa iyo Etcher software sezvo iri nyore kwazvo pane kuwedzera mufananidzo kukadhi uchishandisa rairo yekuraira kunyangwe, kana iwe uri wemberi mushandisi, zvirokwazvo iwe unodzora chero eayo maviri sarudzo zvakanaka. Iyi poindi mukuita, neimwe nzira kana imwe, kazhinji inotora maminetsi gumi. Kana danho iri rangoitwa, isu tinongofanirwa kubatanidza yedu Raspberry Pi kuyedza kuti kumisikidza kwaitwa nenzira kwayo.
Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge U \_ u Raspbian kuisirwa pane yako Raspberry Pi, isu tinongofanirwa kuisa iyo RetroPie emulator pairi. Kuti uite izvi, chinhu chekutanga kuita kuisa iyo git package. Iyi pasuru inowanzo gadzirirwa nekutadza asi, kana tisina iyo, isu tinongofanirwa kuisa inotevera mirairo.
Kana ese mapakeji akaiswa uye akagadziridzwa, isu tinofanirwa kuisa inotevera mirairo iyo ichanyatso kuisa iyo emulator pane yedu vhezheni yeRaspbian.
Patinoita rairo yekupedzisira isu tinofanirwa kuona mufananidzo wakafanana chaizvo neuyo wandinokusiya uri pazasi pemitsara iyi. Mariri, sezvauri kuona, isu tinongofanirwa kuratidza kuti iko kwekutanga kuiswa kunoitwa. Izvi zvinogona kutora maminetsi akati wandei. Kana kumisikidza kwaitwa, isu tinofanirwa kutangazve iyo inoshanda sisitimu.
Gadzira RetroPie paRaspberry Pi
Panguva ino isu takatokwanisa kuisa emulator, mune imwe yeiyi nzira mbiri, isu tinofanirwa kuenderera mberi nekugadzirisa mamwe maturusi anozotibatsira kuvandudza zvakanyanya ruzivo rwedu rwevashandisi pamwe neanogona kutonga.
Chishandiso chekutanga chatinofanira kugadzirisa iSamba. Iyi software ichave iyo iyo, kana nguva yacho yasvika, ichatibvumidza isu kubatanidza kune yedu Raspberry Pi kubva kune imwe komputa kuti tiwedzere mitambo. Kuti tiite iri basa isu tinongofanirwa kuwana RetroPie Setup. Muhwindo rinotevera, ingotinya pane sarudzo Gadzira Samba ROM Shares
Maitiro aya anogona kutora maminetsi mashoma asi, kana apedza, Tinogona ikozvino kuwana Raspberry yedu Pi kubva kune chero PC yakabatana kune imwechete network. Kune izvi, mune chero dhairekitori, iri mubara rekero, tinonyora iyo IP yeRaspberry yedu Pi, kana tichiziva, kana rairo // RASPBERRYPI.
Panguva ino, pakupedzisira, isu tine iyo RetroPie emulator yakagadzirirwa pane yedu mamaboard uye, zvakanyanya kukosha, kuiwana kubva kune imwe PC. Zvino chese chatinofanira kuita kutsvaga pamhepo peji uko kwatinokwanisa kurodha mutambo watiri kuda kuisa.
Kana tangove nemitambo iyo yatinoda kuisa yeimwe mutambo koni, isu tinopinda kuburikidza neSamba kune dhairekodhi rakati mutambo mutambo uye tinowedzera mutambo. Kana mutambo uchinge waiswa mune inoenderana dhairekitori, isu tinongofanirwa kutangidza Raspberry yedu Pi kuti iione uye nokudaro tikwanise kutanga kutamba.
Sekupedzisira tsananguro, ndikuudze kuti kana tikashandisa imwe yazvino vhezheni yeRetroPie nekuchengetedzeka kuzere hatizofanirwa kumisikidza zvinodzora sezvo sisitimu yekushandisa yatove nematyairi anodikanwa ekoni yekuzviona. Isu tinongofanirwa kuvabatanidza uye kutangazve bhodhi. Imwe pfungwa yekufunga, kana tichida kutamba nenzira yakanyanyisa kuyerera, enda ku overclock iyo mamaboardboard. Kune izvi isu tinopinda iyo raspi-config menyu. Kuti tiite uye kumisikidza uku, zvachose sarudzo, tinofanirwa kunyora muTerminal:
Kana kodhi iyi yaitwa, hwindo rinofanira kuoneka kwatinosarudza sarudzo 'kudarika'uye, mune iyi nyowani, iyo sarudzo Medium 900 MHz.
Sezvandambotaura, iyi yekupedzisira yekumisikidza ndeyekusarudzika uye unofanirwa kufunga nezvezvinhu zvakati wandei kubvira, sekunge iyo interface ichaenda yakanyanya kuwanda, tiri kumanikidza processor kuti igopisa, chimwe chinhu chinogona kukonzeresa kuti chigume chanyungudika kana tikasashandisa masinki anopisa anokwanisa kudzikisa tembiricha yayo inotsigirwa nefeni.
Mamwe Mashoko: programoergosum
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Raspberry Pi » Gadzira yako wega Arcade muchina neRaspberry Pi